I-PCT Izidakamizwa zabaxhasi bee-series-powder-AASraw powder
/ iimveliso / PCT Izidakamizwa
Siyi-PCT izidakamizwa zabapowder, abathengi be-PCT izidakamizwa zokuthengisa, njengoko sithembisile, zonke ii-PCT izidakamizwa powder zihlambulukileyo zingekho ngaphantsi kwe-98%.
Iidakamizwa zePCT i-powder ithetha isilwanyana se-Pure cycle cycle. I-post cycle ye -rapy iyindlela yokuqesha iziyobisi ezisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba malunga nokuzama ukuzinzisa nokubuyisela ama-hormone yomsebenzisi ngokuqhelekileyo xa umjikelezo we-anabolic kunye ne-androgenic steroid.
I-Clomiphene citrate (i-clomid powder) kunye ne-tamoxifen (i-nolvadex powder) ingaqeshwa umjikelezo weposi emva kokunceda ukubuyisela ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo. Ngenxa yokuba bobabini banako ukuvimbela i-estrogen kwi-hypothalamus kunye ne-pituitary, ngoko ke ukuyeka ukuphazamiseka kwempendulo, sinokusebenzisa iziyobisi ezinokunyusa ngempumelelo i-FSH (i-follicle stimulating hormone) kunye ne-LH (i-hormone ye-luteinizing) kumzimba wesilisa. Ukwanda kwe-LH kunokukunceda ukuvuselela iiseli zeLeydig kwiimvavanyo zokuvelisa i-testosterone.
Abaninzi bafumana nje ukusebenzisa i-nolvadex powder ngokwaneleyo ngokwaneleyo ukuba bafumane ukuphuma kwimigudu yabo. Abanye, nangona kunjalo, bakhetha ukusebenzisa zombini iziyobisi ukugubungela zonke ii-angles. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-nolvadex isalathise ngakumbi ekukhuthazeni ukwanda kwe-LH, kwi-milligram ukuya kwi-milligram yokujonga, xa kuthelekiswa neyo-clomid powder. Kwakhona, abaninzi abasebenzisi bayakhalaza ngemiphumo emibi ephuma kwi-clomid powder efana neempembelelo ezibonakalayo kunye nokuguquka kwemizwelo.
Imilinganiselo ye-nolvadex yePCT protocol:
Usuku 1 100mg
Ukulandela imihla ye-10 60mg
Ukulandela imihla ye-10 40mg
Oku ngasentla ngumzekelo wesampula onokusetyenziswa. Kucacile ukuba umjikelezo kunye nezinye iiparitha zingatshintsha iidayi kunye nobude beprotocol yakho yeposi.
Njengoko kuchazwe ngasentla, abasebenzisi abaninzi banokusebenzisa i-nolvadex kunye ne-clomid post powder post ukuze bajikeleze onke ama-angles.
Imilinganiselo ye powvadex powder kunye ne-clomid powder edibeneyo kwi-PCT protocol:
Usuku lwe 1 Clomid powder 250mg + I-Nolvadex powder 60mg
Ukulandela iintsuku ze-10 i-Clomid powder 100mg + i-Nolvadex powder 40mg
Ukulandela iintsuku ze-10 i-Clomid powder 50mg + i-Nolvadex powder 20mg
Le ndlela ifanele iphumelele. Oko kwathiwa, njengokuba i powvadex powder kuphela protocol, ayilwanga kwilitye. Iimjikelezo ezingaphezulu zokudityanisela zingadinga ukuphakanyiswa kwamanani okanye ixesha elide lokusetyenziswa ukuzisa iziphumo ezifunwayo.
Xa uqala umgaqo-nkqubo we-PCT uya kuxhomekeka kwiimveliso ezilawulwa kulo mjikelezo. Khangela yonke i-steroids oyisebenzisileyo ngexesha lomjikelezo wakho kwitheyibhile engezantsi, kwaye uqaphele isilwanyana esinomhla wokuqala emva kokungeniswa kokugqibela. Oku kungukuthi asiyi kuqali inkqubo ye-PCT xa kusenokuba kunamanqanaba aphakamileyo e-androgens kwinkqubo, eya kwenza iPCT ibe yintshatsha de ibe amanqanaba ahla.
Kutheni i-Bodybuilders isebenzisa i-Clomid powder
I-powder ye-Clomid igama eliqhelekileyo kwiClomiphene Citrate kwaye liyi-syntrotic estrogen. Inqunywe ngemithi ukuze incedise i-ovulation kumabhinqa aphantsi okuzala. Elinye igama lesi-generic nguSerophene.
Uninzi lwe-anabolic steroids, ngokukodwa i-androgens, lubangela ukukhutshwa komzimba we-testosterone. Xa umlenze womzimba ephuma umjikelezo we-steroid, ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo kuyinqanaba kwaye amazinga ama-steroids athathwe kwigazi ayancipha. Oku kukushiya ama-hormones a-anabolic ephakamileyo yegazi, ngoko ke umzimba uphantsi kwe-catabolism, kwaye, ngenxa yoko, ezininzi zezicubu zomzimba ezifunyenwe kumjikelezo ngoku ziya kulahleka.
I-AASraw inikezela iindidi ze-powder eluhlaza ye-PCT izidakamizwa powder, iTamoxifen Citrate / Nolvadex, i-Clomiphene citrate / i-Clomid powder, Exemestane / Aromasin, i-Fluoxymesterone / Halotestin, i-Anastrozole / i-Arimidex ne-Letrozole / i-Femara. Uyakwamkela ukuthatha ezo zinto eziluhlaza kwiAASraw ukukhusela impilo yakho.